Diagenesis: sifooyinka, hababka iyo samaynta | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 23/11/2021 10:17 | Geology
Geology ahaan waxaa jira noocyo badan oo habab oo ka dhaca dhagaxyada iyo deegaanka. Mid ka mid ah waa Diagenesis. Kuwani waa dhammaan hababka sediments ay maraan inta lagu jiro muddada wakhtiga ka bilaabma dhigaalka ka dib beddelka dhagaxa. Xaaladahan, waxaan ka hadlaynaa samaynta dhagaxyada sedimentary iyo dhagaxyada metamorphic.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato digenesis, sifooyinkeeda iyo waxyaalaha xiisaha leh.
1 Waa maxay Diagenesis
2 Hababka Diagenetic
3 Diagenesis iyo sibidheynta
Waa maxay Diagenesis
Diagenesis waa erey loo isticmaalo laba siyaabood: kan hore waxa uu tilmaamayaa habka dib u habaynta qaybaha walaxda oo laga dhigo shay cusub ama ka duwan. Midda labaad, oo aad u badan, isticmaalku waxa uu tilmaamayaa dhammaan geeddi-socodyada ay shiiduhu soo maraan ama maraan inta lagu jiro wakhtiga ay bilaabayaan in la kaydiyo oo ay socdaan ilaa ay ka noqdaan dhagax. Waxa kale oo ay tilmaamaysaa hababka dheeraadka ah ee kiimikaad iyo jidheed ee bedeli kara dhagaxyadan ilaa ay ka sii daraan. Juquraafiga, metamorphismku waa isbeddelka dhagaxyada iyada oo loo marayo hababka juqraafiga ee ku lug leh heerkulka iyo cadaadiska xad dhaafka ah.
Cilmi-yaqaannada Geology-ga ayaa u kala saara dhagaxyada saddex qaybood oo ku salaysan deegaankooda. Dhagaxyada sedimentary waxay samaysmaan iyagoo u beddela lakabyada sedimentary ee dhagaxyada. hanaan u baahan waqti iyo cadaadis badan. Dhagaxyada igneous waxay ku abuurmaan qaboojinta lava ama magma. Magma iyo Lavadu waa laba erey oo isku mid ah, laakiin magma waxa loola jeedaa laawaha weli ka hooseeya oogada dhulka, lafaduna waxa ay ula jeedaa lafaha hadda ka hooseeya oogada. Dhagaxyada Metamorphic waa dhagxaan shicib ah ama sedimentary kuwaas oo isku beddela cadaadis aad u daran, xoog xagal ama heerkulka, laakiin si buuxda uma dhalaalina dhagaxa oo u nuugaan lakabka magma.
Dhammaan hababka kiimikaad iyo jidheed ee sedimentsku maraan marka ay isu beddelaan dhagaxyo, iyo sidoo kale habraacyo taxane ah oo saameeya sifooyinka dhagaxyada, ayaa lagu kala saaray ereyga diagenesis. Nidaamyadani waxay ugu horreyn yihiin hababka kiimikaad ee dabiiciga ah, laakiin sidoo kale waxay ku lug leeyihiin hababka jirka, sida delamination. Si kastaba ha ahaatee, Diagenesis kuma jiraan cimilada, taas oo ka tirsan nooc kale oo habka juqraafiyeed.
Habka diagenesis-ku wuxuu noqon karaa mid aad u adag oo aad u badan in lagu qoro maqaal cabbirkan, laakiin waxay u kala qaybsan yihiin dhowr qaybood. Mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee hababka dheef-shiid kiimikaadka ayaa ah beddelka bayomass ee sediments ee hydrocarbons, taas oo bilow u ah samaynta saliid cayriin iyo shidaal kale. Fossilization waa geedi socodka digenesis ka dhaca heerka molecular. Marka unugyada gaarka ah ee jirka, gaar ahaan xeryahooda qaarkood ee lafaha, ay beddelaan calcite iyo macdan kale, calcite iyo macdanaha kale waxay ku milmaan biyaha iyo biyaha. Dhigista adoo sifeynaya lakabka wasakhda.
Diagenesis iyo sibidheynta
Sibidhku waa marxaladda ugu muhiimsan ee digenesis, Taas oo keenta in qaybo kala duwani ay isku darsamaan midba midka kale. Kani waa hannaan kiimikaad kaas oo macdanaha milmay (sida calcite ama silica) ay ka soo daadanayaan biyaha marka ay dhex galaan wasakhda. Cadaadiska lakabyada is-daba-joogga ah ee saddaxdu waxay keenaysaa habka kala-baxa jirka ee loo yaqaan 'compaction'. Isku-dhafkan, oo ay weheliso sifeynta biyaha qani ku ah macdanta, waxay sababtaa in qaybaha wasakhdu ay u hoggaansamaan macdanta kala diri. Marka basdigu engego, macdanuhu way adkaadaan oo sameeyaan sibidh dabiici ah. Sandstone waa nooc caan ah oo dhagax ah oo sidan loo sameeyay. Marxalado kale oo badan oo kakan ayaa sidoo kale dhici kara, oo ay ku jiraan isbeddelada isku dhafka lakabyada sedimentary iyada oo jeexjeexa biyaha qaada macdanta kala diri.
Habkaan, macdano cusub ayaa lagu abuurmi karaa, marmarka qaarkoodna waxaa ka soo bixi doona macdan ama isku dhisyo kala duwan waxaana lagu bedeli karaa macdan kale ama iskudhisyo kale. Petrification waxay dhacdaa inta lagu jiro diagenesis waana habka ay sediments isu beddelaan dhagax. Si kastaba ha ahaatee, ka dib petrification, Diagenesis wuu sii socon karaa.
Qaar badan oo ka mid ah hababka sifeynta ayaa qaata kumanaan ama malaayiin sano. Khubarada cilmiga dhulka, paleontologists, anthropologists, iyo archaeologists waxay falanqeeyaan dhagxaanta si ay u ogaadaan habka sifeynta ee iyaga sameeyay. Sidan, waxay wax badan ka barteen waayihii hore, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan dhaqdhaqaaqa tectonic ee qolofta, xogta deegaanka, iyo macluumaadka kale ee ku saabsan samaynta dhagaxa iyo taariikhda dhulka.
Diagenesis waxaa ka mid ah lithification, habka beddelidda sedimentiyada dabacsan ee dhagaxyada adag ee adag. Habka lithification aasaasiga ah waxaa ka mid ah cufnaanta iyo sibidhka. Isbeddelka sifaynta jirka ee ugu caansan waa cufnaanta. Marka ay kaydadku kor u kacdo, culayska alaabta is dulsaaran ayaa culaysin doonta dhigaalka qoto dheer. Moolka qoto dheer ee wasakhda ayaa la aasay, way sii adkeyn doontaa oo adkeyn doontaa.
Marka ay qaybuhu noqdaan kuwo aad iyo aad u badan oo cufan, bannaanka daloolka (meel bannaan oo u dhexeeya qaybaha) ayaa si weyn hoos ugu dhacaya. Tusaale ahaan, marka dhoobada lagu aaso maaddooyinka dhowr kiiloomitir ka hooseeya, mugga dhoobada waa la dhimi karaa ilaa 40%. Marka daloollada bannaan ay qandaraas gasho, inta badan biyaha wasakhda ah ayaa la sii daayaa.
Sibidhku waa habka ugu muhiimsan ee loogu beddelo sdimentiyada dhagaxyada sedimentary. Waa isbeddelka dheef-shiid kiimikaadka waxay ku lug leedahay crystallization ee macdanta u dhexeeya qaybaha sdimented shakhsi. Biyaha dhulka hoostiisa waxay qaadaan ions oo xal ah. Si tartiib tartiib ah, ion-yadani waxay soo saaraan macdano cusub oo ku jira bannaanka daloolka, sidaas awgeed waxay xoojiyaan qashinka.
Sida qadarka booska daldaloolada uu hoos u dhaco inta lagu jiro cufnaanta, ku darida sibidhka ee wasakhda ayaa sidoo kale hoos u dhigi doonta porosity-keeda. Calcite, silica, iyo iron oxide ayaa ah sibidhka ugu caansan. Aqoonsiga walxaha koollada ayaa badanaa ah arrin toos ah. Calcite xumbo sibidhka oo ay ugu wacan tahay aashitada dareeraha ah ee la milo. Silica waa sibidhka ugu adag sidaas darteed waxay soo saartaa dhagaxa ugu adag ee sedimentary.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto ogaanshaha cudurka iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Diagenesis